५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित ! - Mitho Khabar
July 7, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित !
यदि तपाईलाई चिसो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् भने, तपाईं अरूलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र बिरामी हुँदा घर भित्र रहँदा अरूसँग हुने अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो मुख र नाकलाई टिशूले कभर गर्नुपर्दछ । जब तपाईं खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ । त्यो बेला प्रयोगपछि उक्त टिशुलाई टाढा फाल्नुहोस् र आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । तपाईंले छुनु भएको वस्तुहरू र सतहहरू सफा र डिसइन्फेक्टिंग पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ